पुरुषहरुले अबस्य हेर्नुहोला पुरुषका यी पाँच कुराबाट टाढा भाग्छन् महिला !! – Kite Sansar
४. पुरुष मित्रसँग ईष्या गर्ने पुरुषः
धेरैजसो पुरुषलाई आफ्नी प्रेमिकाका पुरुष साथीहरु मन पर्दैन । ती महिला आफ्ना प्रेमीका लागि जतिसुकै इमान्दार किन नहोस् शंका गर्न छाड्दैनन् । प्रेमिकाको पुरुष साथीसँग जहिले पनि पुरुषले ईष्र्या नै गरेका हुन्छन् । यस्ता पुरुषले सधैं यो हेर्नुपर्छ कि उनको सामाजिक जीवनमा को छन् र को छैनन्। यदि तपाईंको पनि यस्तै बानी छ भने आफ्नो बानी सुधार्नुहोस्।